Microstation Geographics: Incwadi yenqaku- iGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/I-Microstation Geographics: Incwadi yenkcazelo
Ukuthatha indawo yedemo yasezinzulwini zobusuku, njengokuhlaziya kubahlobo bokuvuka. Nangona inkosi enkulu isitsho ...
... efika kwi readme.txt
Ngenxa yebakala yenjongo
Le ngqiqo ye-Geographics, kodwa isetyenziswe kwiiprojekthi ezingafuni ukufuduka kwaye ngandlela-thile ziqhubeka Bentley Imephu, ngokusekelwe kwi isakhiwo yeprojekthi apho iindawo zibe neendlela ezimbini zombutho:
I nqanaba lokuqala elibizwa ngokuba udidi, njenge-Altimetry, i-Planimetry, Usetyenziso loMhlaba, iCastastral, Administrative, iingozi kunye noXhatshazo, i-Topography, njl.
Inqanaba lesibini libizwa iimpawu (amanqaku), kule ngcamba yolwazi iququzelelwe. Ke, kuluhlu lwecadastral, iipropathi, iibhloko, izakhiwo, imimandla, amacandelo, njl.
Kwinqanaba leBentley Imephu sele ikhona iifeshini kunye nezichaso ezihambelanayo, kodwa kunjalo omnye umqulu.
Yonke le yinxalenye ye projekthi, i-Bentley Imephi ngoku ifowuni Ilifa lemveli. Ingqondo yayo yayi- kwaye isekhona- iyasebenza kakhulu, kuba xa kusenziwa usetyenziso njengezinto ezinje, ncwadi yewebhu, ukudibanisa kwi-database okanye ulawulo olulawulwayo luququzelele ukuba unako ukusebenza kumgangatho wabonakalisi abanempawu kunye neendidi.
Kwenzeka ntoni ukuba eli candelo leJografi liyimfuneko de ube usebenze kwiprojekthi esele ikho. Ukuba uyibonisa umsebenzisi ngosuku lokuqala lwesikolo, baya kuphelelwa lithemba kuba abayifumani indlela yokusetyenziswa kwixesha elifutshane kwaye banokucinga ukuba kunzima xa besiva izifinyezo ezinje ucf, idx, entitynum, mslink, kufuphi, msgeo, phakathi kwabanye.
Indlela yokudala incwadi yesigqibo
Kukulungele ukuba uchaze kwifayile ye-Excel ubuncinci amagama eendidi kunye neempawu esinethemba lokuba nazo kwilungu ngalinye. Iipropathi ezithile zempawu nganye nganye azenzi ngqondo ukuba zibekiwe kodwa endaweni yemephu apho sivavanye khona kwaye zinembonakalo eyamkelekileyo okanye isimboli eqhelekileyo.
Ukufikelela kwincwadi yenqaku, kwenziwa Iprojekthi / isetyenziswe. Emva koko sivula iprojekthi eyabela umsebenzisi kunye nesikhombisi soqhagamshelo kwiphaneli.
Emva koko sikhetha Iifayile / Ukusekwa kwezinto. Ngale ndlela sinokufikelela kwiphaneli apho unokwenza khona iindidi, uchaze iimpawu, uphawu, itafile apho zinxulunyaniswe khona kunye nemiyalelo enxulumene neempawu.
Amanqwanqwa angentla abiza ixabiso elithile ukuba aziqonde ngosuku lokuqala ngaphandle kwe-adrenaline enhle, kodwa ngaphezulu nangaphezulu ngaphantsi komyalelo:
Ukwakha uluhlu: Bhala igama lodidi, unike ifomathi yolwandiso, ifayile yesalathiso, emva koko ucofe iqhosha Faka, kwaye Komiti ukugcina kwi database.
Ukuguqula isigabaUdidi luchukumisekile, uhlengahlengiso lwenziwe, emva koko liqhosha Gqiba, kwaye Komiti u kugcina.
Ukwakha impawu: uthinte isigaba, bhala ikhowudi, bhala igama, bhala amanqaku, kwaye iqhosha komdlalo, thintela into yemephu eneempawu, ngoko Faka, ngoko Komiti u kugcina.
Yenza iParamodify features: chukumisa icandelo, chukumisa uphawu, guqula iipropati, iqhosha Gqiba, kwaye Komiti u kugcina.
Ngale ndlela, iindidi kunye neempawu zidalwe, eziza kuhlaziywa kwakhona itafile Iimbonakalo, yeprojekthi, makube kwi-Oracle, SQL okanye kwi-Access.
Indlela yokwabela iimpawu
Ukukwazi ukwabela iimpawu kwizinto okanye ukwakha kwi-fly kunye ne-attribute esebenzayo yenziwe ngeendlela Izixhobo / umphathi weMpawu. Lapha sikhetha uluhlu kunye nombono, oku kubizwa ngokuba Uphawu olusebenzayo.
Emva koko ubelwe, ususe, okanye uthintane impawu yento isebenzisa izixhobo zemiSebenzi, ukuba ayisebenziyo Izixhobo / iiGografia / iimpawu. Iqhosha lokuqala lisetyenziselwa ukukhetha umlinganiselo kwizinto sele sele unayo, ezi zilandelayo zizabelwa (fakela) okanye ususe (ukufumana).
Iqhosha lesine li kwakhona uphawu olusebenzayo kunye neyokugqibela ukubonisana neempawu ukuba into inemephu.
Indlela yokubonisa iimpawu
Umlingo wale nto kukuba emva kokuba wabelwe iimpawu kwizinto, isixhobo Izicwangciso / Ukubonisa Umphathi uvumela ukuba ucime okanye uvule iinkcukacha ezithile. Kuba oko kusebenziwe kuyo khangela uluhlu, isetyenziswe Faka isicelo kunye nokuhlaziya ukuhlaziya umboniso kwisikrini.
Oku akufani nento kwinqanaba, kumbala kunye nohlobo lomgca; yipropati yokuthunyelwa ukuba kungakhathaliseki ukuba yeyiphi inqanaba okanye umbala izinto ezinayo, iya kubonisa njengoko ithethayo Incwadi yomxholo. Ukuthintela ukuphindwaphindwa, izinto zinokwabelana ngeempawu, njengoko kunjalo kumda webhloko, okwangumda wepropathi, ohambelana nomda wendawo kunye nomda womda wedolophu. Indawo ephambili ichazwe kwipropathi yenqaku elibiziweyo Bonisa umyalelo y phambili.
Ukukopela iphrojekthi kunye neenkcukacha ezidibeneyo, sele zenziwa njengoko ndichazile ngexesha langaphambili.